အထည်ချုပ်များအတွက် 30D အရောင်အသွေးစုံသော Fusible Line ရောင်းချ
အထည်ချုပ်က BRAND များအတွက်တရုတ်အရောင်အသွေးစုံသော Fusible Line: WEIBOFZ HS ကုတ်: 5903909090 1. MOQ: 3000m အစိမ်းရောင်အပြာရောင် / အရောင်နီ, လိမ္မော်ရောင်နှင့်ဒါပေါ်တွင် 200 ကျော်အရောင်များရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ 2. ပုံစံများအမှတ်ဖန်ဆင်းနိုင်: S230 3. ပစ္စည်း: 100% polyester 4. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, ကျုံ့ယဉ်, ခဝါချမှု, heatroof 5. Weave: Twill 6.Dyeing & Finish: 7. အသုံးပြုမှု coating: ဒါကြောင့်အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့် 8. Pack အပေါ်: 100/200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, ဆိပ်ကမ်း Loading ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် 9. အရသိရသည်အသေးစိတ်: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား 11.nPrice အသုံးအနှုန်းများ: FOB, CIF, CFR အ
မဟုတ်သောယက် Fusible Interlining W8025 ရောင်းချ
non-ယက် polyester အထည်ချုပ်ကော်နံရံက BRAND: WEIBOFZ 1. မော်ဒယ်: အဘယ်သူမျှမ .: W8025.1G 2. ပစ္စည်း: 100% polyester 3. အကျယ်: 100cm 4. အလေးချိန်: 30GSM (+/- 2) 5. အသုံးပြုမှု: ဝတ်စုံ & ယူနီဖောင်း မူလအစ၏ & လောင်းကုတ်အင်္ကျီ & ဂျာကင်အင်္ကျီ 6. Place: Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး) 7. လျှော်အခြေအနေများ: 3000m / အရောင် 9. FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: 40 ဒီဂရီ & ခြောက်သွေ့တဲ့သန့်ရှင်းရေး 8. MOQ မှာလျှော် T / T
နိုင်လွန် polyester Fusible Interlining W8518.3G ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: နိုင်လွန် polyester fusible interlining W8518 BRAND: WEIBOFZ 1. MOQ: 3000m / အရောင် 2. ပုံစံများအမှတ်: W8518.3G 3. ပစ္စည်း: 50% polyester, 50% polyester 4. Feature ကို: ကော်, elastic, ကျုံ့ယဉ်, ခဝါချမှု, heatroof 5. Technical: မဟုတ်တဲ့ယက် 6.Dyeing & ပြီးဆုံး: 7. အသုံးပြုမှု coating: ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်9နှင့်အညီ 100 အ / 200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျ: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 8. Pack အပေါ် ။ FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
50D ယက် polyester Fusible White ကအနားသပ်ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 50D ယက် polyester Fusible အဖြူရောင် BRAND အနားသပ်: WEIBOFZ 1. MOQ: 3000m / အရောင် 2. ပုံစံများအမှတ်: W150.W 3. ပစ္စည်း: 100% polyester 4. Feature ကို: fusible, ကော်, elastic, ကျုံ့ယဉ်, ခဝါချမှု , heatroof 5. Technical: ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက် 9. FOB အညီ 100 အ / 200 / စတုရန်းမီတာ 300 / လိပ်, အသေးစိတျ: ယက် 6.Dyeing & ပြီးဆုံး: 7. အသုံးပြုမှု coating: အဝတ်အိမ်အထည်အလိပ်, အိတ်, ကစားစရာများနှင့်ဒါ 8. Pack အပေါ် ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း, တရုတ် 10. ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: T / T အဓိကအား
Silver, ကူးမှုနိုင်လွန် signal ကိုချည်ချထားတဲ့
Silver, အသိဉာဏ်•အထည်အလိပ်အဘို့အကူးမှုနိုင်လွန် signal ကိုအပ်ချုပ်ချည် / လိုင်းချထားတဲ့
ကူးမှု polyester အတွင်းမှကာဗွန်
ကာဗွန်-အတွင်းပိုင်းကူးမှု polyester ဝိုင်ယာကြိုး
Silver, ကူးမှုအပ်ချုပ် coated / ချထားတဲ့
ကူးမှုနိုင်လွန် monofilament အတွင်းမှကာဗွန်
နိုင်လွန်ကူးမှု monofilament အထဲမှာထူကာဗွန်
ကာဗွန်အနက်ရောင်ကူးမှု PP / နိုင်လွန်ဝိုင်ယာကြိုး
ESD ဖြီးဘို့ကူးမှု PP / နိုင်လွန် monofilament အတွင်းမှကာဗွန်အနက်ရောင်
41 - 50 Total 661 (67 pages)
1......34567 ......67To Page Go